Nepali Christian Bible Study Resources - यातयात र सञ्चार
» अध्ययन मालाहरू » बाइबलकालीन चलनहरू » ४-यातयात र सञ्चार
हामीले यी माथिका पदहरुबाट थाह पाइसकेका छौ कि पैदलको यात्रा कहिलेकाही मात्र गरिन्थ्यो। लामो यात्राको लागि मानिसहरु प्राय घोडाहरु, गधाहरुको प्रयोग गर्दथे। यदि हामीसँग साधन छ भने किन हिड्नुको आवश्यकता पर्‍यो। मरुभूमिको यात्राको लागि परमेश्वरले शिद्ध साधनको रचना गर्नुभएको छ - उँठ। उँठले पानीविना नै धेरै दिन सम्म यात्रा गर्नसक्छ।
एउटा भजन ("अचम्मको अनुग्रहले") मा यस्तो गाउँछौं,
शाहीदूत चाहिँ सन्देश बोकेर जाने र त्यसलाई वाचन गर्ने व्यक्त्ति हो। यो व्यक्त्ति शहरमा आउने बित्तिकै सबै मानिस भेला हुन्थे।राजाबाटको सन्देश सुन्नको तयार हुन्थे। तब शाहीदूतले यसरी गर्थे, सबैले सुन सुन सुन... र आफ्नो सन्देश दिन्थे। कहिलेकाही नराम्रो खबर पनि हुन्थ्यो जस्तै शत्रुले हाम्रो भूमिमा आक्रमण गर्दै छ। अनि कहिलेकाही शुभ खबर पनि हुन्थ्यो जस्तै हाम्रो विजय भयो। हामी दानिएल ३५:१-५ शाहीदूत विषयमा पाउँछौं जसले ठूलो शोरले राजा नबुकदनेजरको सन्देश लगेका थिए।
२ तिमोथी ४:२ मा पास्टरलाई वचनको _________ भनिएको छ। "प्रचार" शब्दको अर्थ "शाहीदूतले झै घोषणा गर्नु" हो।जब पास्टरले प्रचार गर्दछ, उहाँले मानौं के गरिराख्‍नुभएको हुन्छ?
के तपाईंलाई थाह छ कि परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी शाहीदूत भएको चाहनुहुन्छ? मर्कूस १६:१५ मा राजा भन्नुहुन्छ,"सारा संसारमा जाऔं र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार ________ गर।" हामीहरु शाहीदूत झै सुसमाचार घोषणा गर्नेहरु हौं। हामीसँग सबै ठाउँमा सारा मानिसकहाँ पुरयाउन राजाबाटको शुभ खबरको सन्देश छ। अनि प्र____________ विना तिनीहरुले कसरी सुन्लान् त (रोमी १०:१४)।यदि शाहीदूत छैनन् भने राजाको सन्देश तिनीहरुले कसरी सुन्लान् त? तिम्रो स्कूलका साथीहरुले राजाको सन्देशलाई कसरी सुन्छन् होला? के राजाले व्यक्तिगतरूपमा उनीहरुलाई भटेर राजा आफैले उनीहरुलाई सन्देश दिनुहुन्छ होला?________परमेश्वरले मानिसहरुसँग शुभसन्देश आदनप्रदान गर्न शाहीदूतको प्रयोग गर्नुहुन्छ (२ कोरिन्थी ५:१९-२१)।अनि राजाको शाहीदूत मध्ये एक बन्न पाउनु प्रत्येक विश्वासीका निम्ति गौरवको कुरा हो।
« खाने र लाउने
सङ्गीत र खेल »